တရုတ်ဘက်စုံသုံး PU Foam လက်စွဲအမျိုးအစားထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - GNS
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဘက်စုံသုံး PU Foam လက်စွဲအမျိုးအစား
Multi Purpose PU Foam Manual Type A11 သည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ အရည်အသွေးမြင့်ဘက်စုံသုံး polyurethane အမြှုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရေမြှုပ်လျှောက်လွှာကောက်ရိုးနှင့်သုံးရန်အဆင်ပြေအောင် ဦး ခေါင်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ အမြှုပ်သည်ချဲ့ထွင်ပြီးလေထဲတွင်အစိုဓာတ်ဖြင့်ပျောက်ကင်းစေလိမ့်မည်။ ဤဘက်စုံသုံး PU Foam A11 သည်မစုံလင်မှုများကိုတံဆိပ်ခတ်ရန်၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများတပ်ဆင်ခြင်း၊ မြင့်သောအသံနှင့်အပူလျှပ်ကာနှင့်အခြားပြုပြင်ရေးနှင့်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်သည်။
၁။ PU ဖောင်သုံးလက်စွဲအမျိုးအစား A11 ၏ထုတ်ကုန်အသွင်အပြင်
၂။ PU FOAM MANUAL TYPE A11 ၏အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များ
ကော်အား (kPa) 130
ရေစုပ်ယူမှု (ML) ၂ ~ ၃ (အပေါ်ယံလွှာမရှိပါ)
၃။ အသုံးချ PU အမျိုးအစားများ၊
4. MULTI PURPOSE PU FOAM MANUAL TYPE A11 ၏အသုံးချနည်းလမ်းညွှန်ချက်များ
၅။ PU FOAM လက်စွဲစာရိုက်အမျိုးအစား A11 ၏သိုလှောင်မှုနှင့်ရှင်သန်မှုဘဝ
6. ထုပ်ပိုးခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် MULTI PURPOSE PU FOAM MANUAL TYPE A11 ကိုထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
hot Tags:: Multi Purpose PU Foam Manual အမျိုးအစား၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်၊ စက်ရုံ၊ စျေးနှုန်း
ဘက်စုံသုံး PU Foam